मुख्यमन्त्री दिए ओली तिर ढल्किने कांग्रेसको संकेत - Rastrakokhabar
मुख्यमन्त्री दिए ओली तिर ढल्किने कांग्रेसको संकेत
९ माघ २०७७, शुक्रबार १४:१५
काठमाडौं, ९ माघ । सत्तारुढ नेकपामा राजनीतिक विभाजन आएपछि अहिले प्रदेश नम्बर १ र बागमतीको सत्ता संकटमा परेको छ । नेकपाकै ओली समूहको मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा प्रचण्डमाधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि सत्ता संकटमा परेको हो ।
ती प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस अविश्वासको प्रस्तावको निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको छ । उसले जुन समूहलाई समर्थन गर्छ, सोही समूको जित हुने अवस्थामा कांग्रेसको समर्थन कसलाई भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्रै विवाद देखिएको छ ।
सभापति शेर बहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा आज भएको केन्द्रीय पदाधिकारी र बागमती प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकमा सभापति र अन्य नेताको मत बाझिएको हो । देउवाले जुन समूहले मुख्यमन्त्री दिन्छ, सोही समूहसँग मिल्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
तर, नेताहरुले पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध सडकमा रहेको अवस्थामा प्रदेशमा उनैसँग मिल्न नहुने मत राखेका छन् । प्रदेशमा मिल्दा भोलि जनतामा जान समस्या हुने उनीहरुले बताएका छन् ।
प्रचण्डमाधव समूहले पनि मुख्यमन्त्रीकै प्रस्ताव ल्याएकाले उनीहरुसँग मिलेर सरकार बनाउन देउवालाई रामचन्द्र पौडेल, नविन्द्रराज जोशी, गगन थापालगायतले सुझाव दिएका छन् । तर, देउवा भने प्रदेश १ मा शेरधन राईलाई समर्थन गरेर बागमतीमा आफ्नो सरकार बनाउने दाउमा छन् ।
Previous Post	पुस ५ गतेको पुरानै मिति राखेर संसद विघटनको सूचना रातारात राजपत्रमा प्रकाशित
Next Post	ओलीले संविधानलाई च्यातच्युत पारेर ताण्डव नृत्य देखाए :भुसाल
कोभिड भन्दा तर्सिने संख्या घट्यो तर संक्रमित संख्या बढ्यो
किन घट्दै छ नेप्से ,यी हुन मुख्य कारणहरु?
रिमा बिश्वकर्माले कहिले गर्लिन त बिवाह?
सुनको भाउ अपत्यारिलो रुपले घट्दै
आजको राशिफल (वि.सं. २०७७ फागुन १३ गते, बिहीवार)
बुधबार कोरोना संक्रमितको संख्या निको हुने भन्दा बढी
प्रधानमन्त्री संग अलिकति पनि नैतिकता बाँकी रहे तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ :पम्फा भुसाल
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १५:२५
प्रचण्ड–माधव र देउवाबिच भेटवार्ता हुदै
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १३:०३
सर्वोच्चको फैसला पछि अबको राजनीतिक कोर्ष
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १२:५३